Innovations - Foton Motor Boka Co., Ltd.
Iyo mbiri-nhanho yepasi rose R & D system neBeijing semuzinda, Germany senzvimbo yemagetsi nemagetsi zvemagetsi uye matekinoroji emangwana neJapan seR & D mutyairi wemotokari dzevatakuri kuvaka yepasi rose kirasi hunyanzvi kugona.
tekinoroji uye hunhu
Simba rekuvandudza rinoputika kubva mukuchinjana pakati petekinoroji nehunhu. FOTON's R&D nzvimbo muChina, Germany neJapan vakaunganidza mainjiniya mazana matanhatu nemakumi mashanu kubva kunyika dzinopfuura makumi mana uye vakaona zviuru zvishanu zveR & D patent.
R & D ZVINOGONESESA001
Kuedza uye kuongorora
chaiwo simulation kuyedza kugona
Maindasitiri-anotungamira chaiwo simulation bvunzo kugona kunosanganisira kuparara chengetedzo, aerodynamics uye NVH simulation uye optimization iyo inonyatso kuvandudza mota kutyaira ruzivo, kuchengetedzeka uye kuvimbika.
KUKWANYA KUNYENGETEDZA KWEZVO
Cab simba bvunzo iri kutungamira muindastiri.
Yekutanga kuitisa aerodynamics CFD kuongorora uye mota mhepo tanera muChina, ichideredza mhepo kuramba ne20% uye kuchengetedza 4% mafuta.
NVH KUFANANA NOKUDZIDZA KUEDZA
Indasitiri-inotungamira NVH simulation tekinoroji yakachengetedzwa, inovandudza ruzivo rwekutyaira mota zvinobudirira kuburikidza nekuderedza kudengenyeka uye ruzha rwezvinhu zvakakosha seinjini, muviri uye chassis.
Global-inotungamira mashandiro kugadzikana uye kutsetseka
Indasitiri-inotungamira kuvimbika nekusimba
kwevanhu, rori nemugwagwa
FOTON yakatanga China yekutanga rori yakazvimiririra muna 2016. Ruzivo rwunogovaniswa pakati pevanhu, rori uye mugwagwa wekuchengeteka, kugadzikana, kuchengetedza simba uye kugona kutyaira kuburikidza neIOV, data hombe uye kushandiswa kweL3 yakazvimirira kutyaira. Kugadzirwa kweMisa kwetiraki yakazvimiririra ichatanga muna 2025.
IFOTON, inotungamira IOV sevhisi inopa, batanidza munhu, mota uye chinongedzo chakavakirwa paIOV, hombe dhata uye gore chikuva chekugovana chaiyo-nguva ruzivo, kukurumidza kutaurirana nenyika uye kugadzirisa mota R&D, kugadzira, kushambadzira uye sevhisi kuitira kuti igone vashandisi kuti vawane kungwara mashandiro & kutonga uye nekubatana chiitiko chiri kupfuura kwekutyaira mota. IFOTON inopa yakakosha IOV mhinduro kune FOTON mota, vatengi vanobva indasitiri, vamiririri pamwe nevatengesi, vanobatirana nehurumende.
UBI Inishuwarenzi Yakatsaurirwa kufamba Cargo inoenderana Refueling inopa Kutsiva padhuze nepamutemo Bvunzurudzo Yechokwadi-nguva traffic Pedyo padyo padyo padyo nepaki.
kure kuongororwa Kukanganisika Kununura Manyorerwo Mota yekuziva Mota chiitiko Anti-kuba kuteedzera Kuchengeta chiyeuchidzo kununura kwechimbichimbi
Kugadziridza chigadzirwa Kugadziridza Kwekushambadzira Management KweMusika kuongororwa